Sidee loo daryeelaa aaladaha kaydinta la qaadan karo? | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | Waqtiyada firaaqada, Tiknoolaji
1. Ka jar qalabka si fiican u isticmaal kadib
Ka dib markaad u isticmaasho kombuyuutarka, waa inaad ka furaysaa xulashada «Qalabka si ammaan ah uga saar», kaas oo ka muuqda baalka hoose ee desktop-ka. Halkaas guji oo raac tallaabooyinka. Waa isku mid markaad rabto inaad kaar kaameradda ka saarto: waa inaad damisaa kamaradda ka hor intaadan ka saarin xusuusta.
2. Sida xusuusta markasta loo ilaaliyo
Xidhiidhiyayaasha USB-gu waa inay noqdaan kuwo aan boodh lahayn, taasna waa inay dabooshaa marka aan la isticmaalin. Ha u isticmaalin walxaha nadiifinta dareeraha ah tooska isku xiraha, laakiin u isticmaal suufka suufka xalka nadiifinta ee kormeerayaasha ama shaashadaha. Ku keydi CD-yada iyo DVD-yada sanduuqyadooda oo ha ku dul dhigin midkood kan kale.
3. Iska ilaali inaad qalabka u soo bandhigto qoyaanka
Waa wakiilka ugu halista badan ee kaararka iyo qalinjebinta qalinka maxaa yeelay keydka yar ee biyaha uumiga ayaa soo gali kara aaladda waxayna si daran u saameyn kartaa wareeggeedii. Soo-gaadhista ilaha tooska ah ee kuleylka sida shooladda iyo iftiinka qoraxda waa in sidoo kale laga fogaadaa: waxay sababi kartaa dhaawac aan laga soo kaban karin.
4. Ha ku qasbin kaararka flash-ka iyo qalin qalinka qalabka wax lagu xiro
Labada kaar flash iyo isku xirayaasha USB drive-ka waa in lagu dhejiyaa hal meel maadama ay yihiin kuwo aan toos ahayn. Deg deg ama walaac awgood, qofku wuxuu u janjeeraa inuu qasbo isku xiraha markuu galo meel khaldan. Ha ku qasbin wax ka badan intii loo baahnaa maxaa yeelay aaladda iyo booska labaduba way jabi karaan.
5. Sikastaba, ha ilaawin inaad sameyso keydadka
Markasta oo ay suurtagal tahay iyo in laga fogaado aakhiro, waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid nuqulo nuqul ah macluumaadka ku kaydsan kaararka flash iyo pendrives (oo loo yaqaan hayaan). Sababtoo ah wixii ka baxsan dhammaan daryeelka iyo taxaddarrada la qaaday, aaladaha ayaa maalin maalmaha ka mid dhici kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sidee loo daryeelaa aaladaha kaydinta la qaadan karo?
Paula Correa dijo
aad u wanaagsan..qilaafku waa inuu sameeyaa mid kale oo badan oo garabka wadista ah, taas oo iyaduna ah qayb kayd ah, oo iyaduna ah unug soo noqosho ah .. tan laga bilaabo waa inay wax badan ugu adeegtaa jidadka nolosha .. inay mar labaad horumariso. .. nolosha bilow ahaan mar labaad si aad uga sii fiicnaato shaqooyinka nolosha ee daraasadaha iyo shaqooyinka si aad ugu noqoto mid u adeegta khibrad ahaan una shaqeysa nolosha!
back this0 aad bay faa'iido ugu tahay0 shaqada .. iwm .. iska ilaali mijos tani aad ayey ugafiican tahay msn iyo jaifais iyo feisbuks taxadar mijiticos bye bye bye pay bye bye bye
Ku jawaab Paula Correa
waa inaad bacaneria ka dhigtaa qalabka ragga male. uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ku jawaab raicon
Boggan waa mid aad u fiican maxaa yeelay wuxuu noo ogolaanayaa inaan wax badan ka ogaano